Aagan Fm पर्यटनको विकास गर्न सके बुद्धशान्ति संवृद्ध बन्छ
झापा,मंसिर १४ । तीन तहको राज्य संरचना तय भएपछि कुन स्थानीय निकायमा कस्तो संम्भावना छ ? भनेर त्यसको खोजी गरी संम्भावनालाई यथार्थमा बदलेर संवृद्धशाली स्थानीय निकायमा परिणत गर्न विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कम्मर कसेर लागेका छन् । १५ स्थानीय तह रहेको झापाका सबै स्थानीय निकायको खास–खास विशेषता रहेका छन् ।
बुद्धशान्तिको बुधबारेक्षेत्रमा जगद्गुरु जन्मस्थल, देवदेवालय, शहीदका नाममा शहीद वाटिका, वन क्षेत्रमा पार्क बनाउन सक्ने आधारहरु छन् ।शान्तिनगरक्षेत्रमा चिया वगान, भ्यूटावर, झोलुङेपुल, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरुले संम्भावना देखाइरहेका छन् । शान्तिनगरमा बन्जि जम्प, केवलकारको संभाव्यता अध्ययनले पनि अवसर रहेको दर्शाएको छ ।
करिब ४०० बर्ष पुरनो ठुटेवरको इतिहासलाई प्रचार गर्न सके त्यो एउटा लोभ्याउने ठाउँ बन्न सक्छ पर्यटकहरुका लागि । बुद्धशान्ति गाँउपालिका वडा नं. ६ मा अवस्थित पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना बोकेको ठुटेवरमा मंसिर ४ गते देखि ८ गते सम्म ५ दिने मेला लागेको थियो । प्रत्येक वर्ष कात्र्तिक शुक्ल पूर्णिमामा लाग्ने यो मेला यसवर्ष पनि सभ्यता अनि भव्यताका साथ सम्पन्न भएको ठुटेवर मेला समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर राईले बताए । अपेक्षा गरे भन्दा बढि संख्यामा आगन्तुकहरुको उपस्थिती रहेको र पाँचैदिन उत्साहप्रद भएको अध्यक्ष राईले बताए । यो कुराले पनि पर्यटक बाक्लै गरी आउने प्रष्ट पारेको छ ।